ktmkhabar.com - बालेन शाहलाई खुला पत्र
प्यारो भाइ बालेन,
उही तिमीलाई अत्यन्तै माया गर्ने तिम्रो दाइ ।
म यहाँ आराम छु तर बेचैन छु । आशा छ तिमी पनि आरामै छौ यद्यपि तिमी मभन्दा पनि बेचैन छौ भन्ने महसुस गरेको छु । तिमीलाई लेख्नु पर्ने कुरा धेरै थिए तर तिमीसँग पत्र पढ्ने समय कम छ भन्ठानेर छोटो पत्र पठाउने जमर्को गरेँ । आशा छ तिमीले अवश्य पढ्ने नै छौ ।
यो पत्र तिमीसम्म आइपुग्दा सम्भवतः तिमी यो देशको राजधानीको नगर पिता भइसकेका हुनेछौ । भलै प्राविधिक रूपमा तिम्रो जित वा हार जे होस् तिमीले लाखौँ करोडौँ नेपालीको मन जिती सक्यौ । यो पत्र लेख्दासम्म आएको परिणाम अनुसार तिमीले पाएको दश हजार हाराहारीको भोट तथाकथित ठुला दलहरूका लागि दश हजार, दश लाख झापडहरू हुन् । तिमीले पाएका हरेक भोटहरू हालका दलहरूका अयोग्य उम्मेदवारहरूका लागि नो भोटहरू हुन् । मैले यसो भनिरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलका संघर्षरत, क्षमतावान् जो कोही व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित वा अपमान र तिमीलाई देवत्वकरण गर्न खोजेको भने होइन । हामी सबैलाई थाहा छ कि त्यी दलहरूमा प्रवेश गरेर उनीहरूको सिन्डिकेट तोड्ने कुरा सम्भव छैन । उनीहरूले तिमी जस्ता क्षमतावान् युवाहरूलाई कहिल्यै माथि उठ्न दिँदैनन् । तिमी जान्दैनौ, तिमी अपरिपक्व छौ । तिमी यो राजनीतिक खेलको नियम बुझ्दैनौ । तिमीले जेल नेल भोगेका छैनौ । यस्ता हजारौँ मिथकहरू सिर्जना गरेर तिम्रा पखेटाहरू काटिन्छन्, दबाइन्छन् । त्यसैले तिमीले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर आफ्नो बुद्धिमानी प्रस्तुत गरेका छौ ।
अरू त तिमीलाई धेरै के नै दिन सक्छु र । तिम्रो शुभचिन्तकको नाताले तिमीलाई केही सुझाव दिनसम्म मन गरेँ । यो देशको एउटा योग्य इन्जिनियर, स्रष्टा, कलाकार आज राजनीतिमा आएर एउटा महत्त्वपूर्ण छाप दिएका छौ कि अब युवा वर्ग तथाकथित ठुला दलको सिन्डिकेट तोड्न सक्षम छन् । तिम्रो क्षमताले आज देशै तरङ्गित छ । मलाई आज गर्व छ तिमीले यो तरङ्गलाई जीवितै राख्ने छौ । अबका केही दिनहरूमा तिमीले नगर पिताको जिम्मेवारी पायौँ भने तिमी सरकारी सेवा, सुविधा, गाडी, पैसा पावरको उन्मादमा फस्ने छैनौ । तिमीले सारा नेपालीले देखेको सपना र तिमीले बीजारोपण गरेको सपनाको हत्या गर्ने छैनौ । यदि तिमीले होस पुर्‍याएर काम गर्‍यौ भने नेपालका मात्र होइन संसारभरका युवाहरूको प्रेरणाको श्रोत बन्नेछौ । परिकल्पना गर्दा तिमीले सही मार्ग भुलेनौ भने आज राजधानीबाट तिमीले सुरु गरेको यो साहसिक एवम् विद्रोही कदम हरेक नगर गाउँ हुँदै देशव्यापी बन्ने छ । त्यतिखेर अहिलेका ठुला भन्ने दलहरू जसले तीन दशकसम्म कुरा ज्यादा काम कम गरे उनीहरूको हालत के होला ?
प्यारो भाइ ! आशा छ, यो इतिहास बदल्ने अवसरबाट आफूलाई वञ्चित गर्ने छैनौ । तिमीबाट त्यस्तो चमत्कारिक परिवर्तन अहिले नगरवासीले खोजेका छैनन् । २०४६ सालपछिको तीन दशक लामो प्रजातान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उही पुरानो सडे गलेका अनुहारहरूले जस्तै मोनो रेल र पानी जहाजका झुटा सपना र आश्वासन देखाएर भ्रमको खेती गरी हावाका महलहरू सृजना गर्दै तहसनहस पार्ने छैनौ । तिनै तथाकथित ठुला भनाउँदाहरूले पुनरागमन हुने गरी कागजी विकास र समृद्धिका चर्का भाषणहरू गरेर सोझा सिधालाई झुक्काएर कुनै पनि कदम चाल्ने छैनौ । देश त खराब शासकहरूले जबरजस्त लादेको भ्रष्ट तन्त्र, नेता र तिनका पिछलग्गुहरूले पचाएका विकृत चाङबाट आक्रान्त छ । यसैको उन्मुक्तिका लागि देशले तिमीजस्तै नयाँ जोस, जाँगर र सोचले भरिएका व्यक्तिहरू खोजेको छ ।
तिमीले चुनाव जित्यौ भने काम गर्ने दौरानमा माथि उल्लिखित बेथितिको खेती गरेर खान पल्केका झुन्डहरूले तिमीलाई लखेट्ने प्रयास गर्नेछन् । तिम्रा हरेक राम्रा कामको विरोध गर्नेछन् । आफ्ना वरिपरि आफ्ना झुन्डहरूको भिड लगाएर त्यसमै रमायौ भने त जो कोही नेपालीले पनि अवश्य नछोड्ला तर विगतका राजनीतिक ठेकेदारहरूले भने तिम्रो एउटै सानो गल्तीलाई पनि हजार तरिकाबाट तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्नेछन् । तिमीलाई चारतिरबाट घेरा हाली तालाबन्दीसम्म गरेर कार्यालय प्रवेश गर्न रोक लगाउने छन् । यहाँ कर्मचारीका युनियनहरू छन् । यहाँ युनियनमा लागे पछि ड्युटी गर्नु पर्दैन । एउटा कार्यालय सहायकले पुरै कार्यालय हल्लाउने क्षमता राख्छ । ती सबै आफ्नो दुनो सोझ्याउन नपाएपछि एकजुट हुनेछन् ।
तिमी एउटा योग्य इन्जिनियरलाई भोलि महानगरको सरकारी इन्जिनियरले पैसाको कौडी बराबर पनि गन्ने छैन । उनीहरूमा यस्ता नेता आए राम गए राम, २–५ वर्षलाई आउँछन् जान्छन् भन्ने र सबै भ्रष्ट हुन् भन्ने छाप छ । यसलाई तिमीले तोड्नु पर्नेछ र भ्रष्टहरूको चङ्गुलबाट आफूलाई जोगाउनु पर्ने चुनौती छ ।
अन्त्यमा मेरो विचार म जस्तै लाखौँ युवाहरूको प्रतिनिधि आवाज हो जसले तिमीलाई सूक्ष्म निगरानी र खबरदारी गरिरहने छ भन्ने कुरा सदैव तिमीले हेक्का राखी रहनु भन्दै आजलाई यति । बाँकी अर्को पत्रमा लेखौँला ।
(लेखक: दुर्गा प्रसाद दाहाल शिक्षा सेवी हुन् ।)